पाँचथरमा थपिए १० जना सङ्क्रमित « Mechipost.com
पाँचथरमा थपिए १० जना सङ्क्रमित
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०७८, बुधबार १७:३०
फिदिम । पछिल्लो २४ घण्टामा पाँचथरमा १० जना कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकामा १९ जनामा गरिएको एण्टिजेन परीक्षणमा छ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको दैनिक वडा नं. २ र ४ का एक–एक जना महिला तथा तिनै वडाका दुई–दुई जना पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको छ । योसँगै याङवरकमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको संख्या ३० पुगेको छ ।
यता हिलिहाङ गाउँपालिकामा १२ जनामा गरिएको एण्टिजेन परीक्षणमा चार जना सङ्क्रमित देखिएका छन् । गाँउपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको दैनिक प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. ४ का दुई जना महिला र वडा नं. ५ का दुई जना पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको हो । हिलिहाङमा हालसम्म ६ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा दुई जना उपचारका क्रममा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आज जिल्लामा ३१ जनामा एण्टिजेन परीक्षण गर्दा १० जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो । आजै ५२ जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ । यसको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ । जिल्लामा ४५ वटा बेड र ४७ थान अक्सिजन सिलिण्डर रहेको समेत उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी याङवरकमा ३० जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । जसमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् । फिदिम नगरपालिकामा भने फिदिम बजार भित्रै २० जना सङ्क्रमित छन् । यस्तै फालेलुङ गाउँपालिकामा पाँच जना, तुम्बेवा गाउँपालिकामा तीन जना र हिलिहाङ गाउँपालिकामा छ जना सङ्क्रमित देखिएका छन् । जिल्ला अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा अन्यत्र ठेगाना भएका तीन जनामा समेत कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको हो ।